बच्चालाई खेलौँना किन्नुहुन्छ ? - eNepalikhabar.com
गृह बच्चालाई खेलौँना किन्नुहुन्छ ?
बच्चालाई खेलौँना किन्नुहुन्छ ?
यदी तपाईका पाँच वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरु छन् भने तपाईहरुसँग पक्कै पनी उनीहरुको जन्मदिन र अरु अवसरमा कस्तो खालको खेलौना किन्नु पर्छ भन्ने जानकारी हुनसक्छ । खेलौना बच्चाहरुको लागि एउटा राम्रो र उत्तम उपहार भएता पनि अरु कुराहरु पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
बच्चाहरु हुर्काउन विभिन्न खेलाउनाहरु खरिद गर्नुहोस् । हरेक खेलाउनाको प्याकेटमा बच्चाहरुको उमेर तोकेको हुन्छ । जुनअहिलेको मुख्य समस्या हो । जस्तै, साना बच्चाहरुको खेलौना ३ देखि ६ महिना सम्म मात्र प्रयोग गर्ने हिसाबले तयार गरेको हुन्छ । ती खेलौना राम्ररी प्रयोग नभएर खेर गएको देखिन्छ । त्यसैले बच्चाहरुको लागि यस्तो सामग्री किन्नुहोस्, जुनकी केही समय मात्र नभएर, उनीहरु ठूलो हुँदासम्म खेल्न र सिक्न उपयोग होस् । अहिलेको समयमा धेरै खेलौना उत्पादन गर्ने विभिन्न नयाँ ब्रान्डहरु आएका छन् । तपाइहरुले आफ्नो बच्चाहरुको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु हुन्छ तर त्यो पनि एउटा नजिकको कम्पनीको सामानमा बरु त्यो भन्दा आफुले जानेको र विश्वास गरेको ब्राण्डमा पैसा खर्च त्यो सामान पछि सम्म काम लाग्छ ।
खेल्दा खैल्दै सिक्न मिल्ने र जानकारी दूवैका लागि उपर्युतm हुन्छ । आजकाल खेलौनाबाट बच्चाहरुले बोल्न, पढ्न, गाउन आदि सिक्न सक्छन् । र यो कुरा बच्चा र अभिभावकको लागि एकदम राम्रो पक्ष हो । धरैजसो बच्चालाई थाहा पनि हुँदैन, उनीहरु खेल्दाखेल्दै धेरै कुरा जानीसकेका हुन्छन् ।
खेल्दा खैल्दै सिक्न मिल्ने र जानकारी दूवैका लागि उपर्युतm हुन्छ । आजकाल खेलौनाबाट बच्चाहरुले बोल्न, पढ्न, गाउन आदि सिक्न सक्छन् । र यो कुरा बच्चा र अभिभावकको लागि एकदम राम्रो पक्ष हो । धरैजसो बच्चालाई थाहा पनि हुँदैन, उनीहरु खेल्दाखेल्दै धेरै कुरा जानीसकेका हुन्छन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
(0.015842 seconds )